Gastric Antrum Inflammation (အစာအိမ်နှင့် အူသိမ် ဆက်ကြောင်းဝရောင်ခြင်း) - Hello Sayarwon
Gastric Antrum Inflammation (အစာအိမ်နှင့် အူသိမ် ဆက်ကြောင်းဝရောင်ခြင်း)
HelloSayarwon » ကျန်းမာရေး အခြေအနေများ » ကျန်းမာရေးအားလုံး » ကျန်းမာရေးအခြေအနေများ » Gastric Antrum Inflammation (အစာအိမ်နှင့် အူသိမ် ဆက်ကြောင်းဝရောင်ခြင်း)
Gastric Antrum Inflammation (အစာအိမ်နှင့် အူသိမ် ဆက်ကြောင်းဝရောင်ခြင်း) ကဘာလဲ။
Gastric antrum inflammation (အစာအိမ်နှင့် အူသိမ် ဆက်ကြောင်းဝရောင်ခြင်း)ဆိုတာဘာလဲ။
Gastric antrum inflammation သို့ antral gastritis အစာအိမ်နှင့် အူသိမ် ဆက်ကြောင်းဝရောင်ခြင်း ဟာ ခံစားရသူကို အတော်မသက်မသာဖြစ်စေတဲ့ autoimmune ပြဿနာတစ်မျိုး ဖြစ်ပါတယ်။ တခါတလေမှာ ဒီရောဂါရှိသူတွေဟာ သူနဲ့တွဲနေတဲ့ လက္ခဏာတွေကို သတိမထားမိတတ်ပါဘူး။
ဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းရင်းကို ဖြေရှင်းဖို့ အက်ဆစ်ကို ကျစေတဲ့ ဆေးတွေနဲ့ အခြားဆေးတွေကို သောက်ခြင်းဖြင့် သက်သာစေနိုင်တဲ့ အစာအိမ်ရောင်ခြင်း အမျိုးမျိုးရှိပါတယ်။ အစာအိမ်ရောင်ခြင်း အမျိုးအစား အတော်များများကတော့ gastric mucosa တစ်ခုလုံးကို ရောင်စေပေမယ့် antral gastritis ကတော့ အစာအိမ်ရဲ့ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုကို သာ ရောင်စေတာဖြစ်ပါတယ်။
သင့်ရောဂါကို မကုသရင် အခြားနေရာတွေကို ပြန့်သွားပြီး နာတာရှည်ရောဂါဖြစ်သွားနိုင်ကာ ကုသဖို့ ပိုမိုခက်ခဲနိုင်ပါတယ်။ ပျော့တဲ့ antral gastritis တွေဟာ ဘက်တီးရီးယား ရောဂါပိုးဝင်ခြင်း (သို့) ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရခြင်း တွေကြောင့် ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
ပျော့တဲ့ antral gastritis မှာ နာကျင်မှု သိပ်မရှိပေမယ့် ဆရာဝန်နဲ့ ဆွေးနွေးသင့်ပါတယ်။ နာတာရှည် အစာအိမ်ရောင်ခြင်းဟာ gastric mucosa မှာ ရောင်နေ၊ ကျုံ့နေတဲ့ အနာတွေရှိခြင်းကို ဖေါ်ပြခြင်း ဖြစ်ပြီး သူတို့ဟာ မပြင်းထန်ရာမှ ပြင်းထန်တဲ့ အခြေအနေတွေ အထိ ရှိတတ်ပါတယ်။
Gastric antrum inflammation(အစာအိမ်နှင့် အူသိမ် ဆက်ကြောင်းဝရောင်ခြင်း) ဟာ ဘယ်လောက်ထိ အဖြစ်များသလဲ။
antral gastritis ဟာ လူတိုင်းမှာဖြစ်နိုင်ပေမယ့် အသက် ၆၀ ကျော်သူတွေမှာ ပိုဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ရောဂါဖြစ်ပွားနိုင်တဲ့အချက်အလက်တွေကို လျှော့ချခြင်းအားဖြင့် စီမံနိုင်ပါတယ်။ အချက်အလက်များထပ်မံသိရှိဖို့အတွက် ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးသင့်ပါတယ်။
Gastric antrum inflammation (အစာအိမ်နှင့် အူသိမ် ဆက်ကြောင်းဝရောင်ခြင်း)ရဲ့ ရောဂါလက္ခဏာတွေက ဘာတွေလဲ။
Gastric antrum inflammation အများစုဟာ လက္ခဏာ မပြတတ်တာကြောင့် လူတွေက သတိမထားမိကြပါဘူး။ ဒါကြောင့် ဆရာဝန်ထံမှာ သွားရောက်စစ်ဆေးတဲ့အခါမှ သိတတ်ကြပါတယ်။ ဆရာဝန်က သင့်ရဲ့ လက္ခဏာတွေကို ကြည့်ရှုခြင်း၊ အစာအိမ်မှန်ပြောင်းကြည့်ခြင်းဖြင့် သင့်မှာ antral gastritis ရှိမရှိ ဆုံးဖြတ်နိုင်ပါတယ်။ antral gastritis ဖြစ်စေတဲ့ အကြောင်းရင်းများစွာ ရှိပေမယ့် လက္ခဏာတွေကတော့ အတူတူပဲ ဖြစ်ပါတယ်
antral gastritis လက္ခဏာတွေထဲမှာ အဖြစ်အများဆုံးလက္ခဏာကတော့ အစာမကြေခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ရောင်ရမ်းခြင်းဟာ အစာအိမ်ရဲ့ antrum ပိုင်းမှာဖြစ်တာကြောင့် အစာခြေ လုပ်ငန်းနဲ့ အစာတွေကို အူထဲစွန့်ထုတ်တဲ့ လုပ်ငန်းတွေ ထိခိုက်နိုင်ပါတယ်။
ဒါဟာ ဝမ်းဗိုက်အပေါ်ပိုင်းမှာ အစာမကြေခြင်းနဲ့ ရင်ပူခြင်းတွေကို ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
အစာမကြေခြင်းနဲ့ ဆက်စပ်နေတဲ့ လက္ခဏာတစ်ခုဖြစ်ပြီး အစာအိမ်ထဲမှာ အစာမရှိသော်လည်း အစာအိမ်နံရံရောင်တဲ့အခါ ကိုယ်ခန္ဓါရဲ့ တုန့်ပြန်မှုက ပျို့ခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ပျို့ခြင်းဟာ ပျော့ရာကနေ ပြင်းထန်တဲ့ အခြေအနေအထိ ရှိပြီး အန်ခြင်းလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
အချိန်ကြာလာပြီး ရောဂါဆက်ရှိနေတာနဲ့ အမျှ လူနာဟာ အစာစားချင်စိတ် ပျောက်ဆုံးလာနိုင်ပါတယ်။ ရှားပါးတဲ့ အခြေအနေမှာတော့ အန်တဲ့အထဲမှာ သွေးစတွေပါ ပါလာနိုင်ပါတယ်။
ရောင်ခြင်းဟာ အစာအိမ်အောက်ပိုင်းမှာသာ ဖြစ်ပေမယ့် အူအထဲကို အစာစွန့်ထုတ်တဲ့ ဖြစ်စဉ်ကို အလွန်ထိခိုက်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အစာမခြေရသေးတဲ့ အစာတွေဟာ အစာခြေ လမ်းကြောင်းထဲကို ဝင်လာပါတယ်။
အဲဒီကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာတော့ ferment လုပ်ပြီး လေတက်လာကာ ဗိုက်ပွခြင်း၊ လေပွခြင်း တွေကို ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုရောင်ခြင်းဟာ အစာအိမ်မှာ လေအပိုရှိခြင်းကိုဖြစ်စေပြီး လေတက်ခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
လေပွခြင်း၊ လေများခြင်းကြောင့် ဖြစ်စေတဲ့ မသက်မသာဖြစ်မှုအပြင် antral gastritis ကြောင့် ဖြစ်စေတဲ့ အခြားမသက်မသာဖြစ်မှု တစ်ခုရှိပါသေးတယ်။ ဒီခံစားမှုကတော့ များသောအားဖြင့် အစာစားချိန်တွေမှာ ဖြစ်လေ့ရှိပြီး မသာယာပဲ ဗိုက်ပြည့်ခြင်း ဖြစ်ကာ အစာကိုပြီးဆုံးအောင် စားနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။
antral gastritis ရဲ့ အခြားလက္ခဏာ တစ်ခုကတော့ ဝမ်းပြောင်းလဲခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလက္ခဏာဟာ အခြားလက္ခဏာတွေလောက် အဖြစ်မများပေမယ့် ဝမ်းပြောင်းလဲမှုဟာ antral gastritis မှာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဝမ်းဟာ အရောင်ရင့်ပြီး ကတ္တရာစီးရောင် ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာ အစာအိမ်လမ်းကြောင်းမှာ သွေးယိုစီးခြင်းကို ဖေါ်ပြပြီး အရေးပေါ်ကုသမှု လိုအပ်နိုင်ပါတယ်။
ရောဂါကိုစောစီးစွာ သိရှိပြီး ကုသခြင်းဟာ ရောဂါပိုဆိုးလာခြင်းနဲ့ အခြားအရေးပေါ် အခြေအနေဖြစ်ခြင်းတွေကနေ ကာကွယ်ပေးနိုင်တာကြောင့် ဒီလိုအခြေအနေကို ကာကွယ်ဖို့ ဆရာဝန်နဲ့ စကားပြောသင့်ပါတယ်။
ဘာတွေက Gastric antrum inflammation(အစာအိမ်နှင့် အူသိမ် ဆက်ကြောင်းဝရောင်ခြင်း) ဖြစ်ပွားစေသလဲ။
Antrum gastritis ဖြစ်ပွားစေနိုင်တဲ့ အကြောင်းရင်းတွေဟာ အရေးကြီးပြီး ကုသဖို့အတွက် လိုအပ်တဲ့ သတိထားမှုတွေ ပြုလုပ်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
အခြားဆေးတွေ၊ ရောဂါပိုးဝင်ခြင်း၊ ဓါတုပစ္စည်း၊ လူမှုရေးဆိုင်ရာ အကျင့်များ၊ စိတ်ဖိစီးခြင်း နဲ့ ခွဲစိတ်မှုဆိုင်ရာ ပြဿနာတွေဟာ Antrum gastritis နဲ့ ဆက်စပ်နေပါတယ်။
Antrum gastritis ဖြစ်စေတဲ့ ဆေးတွေကတော့ အကိုက်အခဲ ပျောက်ဆေးများ (NSAID- naproxen, ibuprofen), steroids, potassium supplements, သံဓါတ်အားဆေးတွေနဲ့ ကင်ဆာအတွက် သောက်နေတဲ့ ဆေးတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အခြားအရာဝတ္ထုတွေ၊ အဆိပ်တွေကို မျိုချခြင်း
အစာအိမ်ရောင်ခြင်းဟာ အခြားအရာဝတ္ထုတွေနဲ့ အဆိပ်တွေ ဖြစ်တဲ့ corrosives (lye and acid) တွေ၊ အရက်၊ ပြင်ပအရာဝတ္ထုတွေဖြစ်တဲ့ အပ်၊ စာရွက်ညှပ်ကလစ်တွေကို မြိုချမိခြင်းကြောင့် ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ခွဲစိတ်မှုနဲ့ ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ အခြေအနေများ
အချို့ ခွဲစိတ်မှုနဲ့ ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ အခြေအနေတွေဖြစ်တဲ့ အပြင်းအထန်ဖျားနေသူ (သို့) ဒဏ်ရာရသူတွေမှာ စိတ်ဖိစီးခြင်း၊ မှန်ပြောင်းကြည့်ပြီးခြင်း တွေမှာ Antrum gastritis အဖြစ်များပါတယ်။
ဒီအခြေအနေဟာ အစာအိမ် အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုကို ထုတ်ပြီးရင်၊ ကင်ဆာ ဓါတ်ရောင်ခြည်ကုသမှု ခံယူပြီးရင်၊ autoimmune ရောဂါများ၊ pernicious anaemia၊ နာတာရှည်အန်ခြင်းတို့ကြောင့်လည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အချို့ရောဂါပိုးဝင်ခြင်းတွေ ဖြစ်တဲ့ တီဘီ၊ ကာလသားရောဂါ၊ ဗိုင်းရပ်စ် ရောဂါပိုးဝင်ခြင်း၊ မှိုရောဂါ၊ ကပ်ပါးကောင်၊ ဘက်တီးရီးယားရောဂါပိုးဝင်ခြင်းတွေကြောင့်လည်း ဖြစ်ပွားနိုင်ပါတယ်။
အဖြစ်အများဆုံး ရောဂါပိုးဝင်ခြင်းကတော့ H pylori ဖြစ်ပါတယ်။ အခြားဘက်တီးရီးယားတွေကတော့ ဆီးအိမ်ရောဂါပိုးဝင်ခြင်းနဲ့ အဆုတ်အအေးမိခြင်းကို ဖြစ်စေတဲ့ ဘက်တီးရီးယားတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
Antrum gastritis ကိုဖြစ်စေတဲ့ အချို့အချက်တွေကတော့ စိတ်ဖိစီးမှုကို ဖြစ်စေတဲ့ သဘာဝအတိုင်း ဇဝဖြစ်စဉ် ဖြစ်နှုန်းကို နှောက်ယှက်တဲ့ အရာတွေနဲ့ အာဟာရချို့ယွင်းခြင်းတွေ ဖြစ်တဲ့ ညီမျှစွာ စားသောက်မှု မရှိခြင်း၊ ကျန်းမာရေးနဲ့ မညီညွတ်သော အစားအသောက်တွေကို စားသုံးခြင်း၊ အရက် အလွန်အကျွံသောက်ခြင်း၊ ဆေးလိပ်သောက်ခြင်း၊ emulsifiers, preservatives ပါတဲ့ အရာတွေကို သုံးစွဲခြင်းတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်မှာ ၇၅%သော အမျိုးသမီးတွေမှာ ဒီရောဂါ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ဘယ်အရာတွေက Gastric antrum inflammation(အစာအိမ်နှင့် အူသိမ် ဆက်ကြောင်းဝရောင်ခြင်း) ဖြစ်ပွားနိုင်ချေကိုမြင့်စေပါသလဲ။
Gastric antrum inflammation ဖြစ်ပွားနိုင်ချေကိုမြင့်စေတဲ့အကြောင်းရင်းတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်
အသက် ၆၀ ကျော်
Gastric antrum inflammation (အစာအိမ်နှင့် အူသိမ် ဆက်ကြောင်းဝရောင်ခြင်း)ဟုတ်မဟုတ်ကို ဘယ်လိုအဖြေရှာအတည်ပြုသလဲ။
တကယ်လို့ ဆရာဝန်က သင့်မှာ ဒီရောဂါရှိတယ်လို့ သံသယ ရှိတယ်ဆိုရင် ရောဂါရာဇဝင်မေးမြန်းခြင်း၊ စမ်းသပ်စစ်ဆေးခြင်း၊နဲ့ အခြားစစ်ဆေးမှု ဖြစ်တဲ့ သွေးစစ်ဆေးမှုလိုမျိုးကို ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါ့ပြင် ဆရာဝန်က အသားစယူခြင်းကိုလည်း လုပ်နိုင်ပါတယ်။
Gastric antrum inflammation (အစာအိမ်နှင့် အူသိမ် ဆက်ကြောင်းဝရောင်ခြင်း)ကို ဘယ်လိုကုသလဲ။
Antrum gastritis အတွက် သင့်လျော်တဲ့ ကုသမှုကို ဆုံးဖြတ်ရာမှာ ရောဂါဖြစ်ပွားစေတဲ့ အချက်က အရေးကြီးပါတယ်။ ဥပမာ ရောဂါပိုးဝင်ခြင်းကြောင့် ဒီရောဂါ ဖြစ်တယ်ဆိုရင် ဆရာဝန်နဲ့ ကုသပြီး ပိုးသတ်ဆေးပေးကာ ဒီရောဂါ ပြန်ဖြစ်ခြင်းကနေ ကာကွယ်နိုင်ပါတယ်။
ဆရာဝန်က ဘက်တီးရီးယားပိုးတွေ ရောင်ရမ်းမှုကို မဖြစ်စေနိုင်တော့တဲ့ အခြေအနေအထိ အစာအိမ်ဆေးတွေကို ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ လူအများစုဟာ ရောဂါအခြေအနေ မဆိုးမချင်း သူတို့မှာ ဒီရောဂါ ရှိတယ်ဆိုတာ မသိကြပါဘူး။
ဒါကြောင့် လူအများစုဟာ ဆေးဆိုင်က အစာအိမ်ဆေးကိုသာ အလွယ်တကူ ဝယ်သောက်လေ့ရှိပါတယ်။ သူတို့မှာ ဝမ်းမည်းမည်းသွားခြင်း၊ ဝမ်းသွားသွေးပါခြင်း၊ ပျို့အန်ခြင်း၊ ဆိုးရွားစွာ အစာမကြေဖြစ်ခြင်း တွေဖြစ်ရင် ဆရာဝန်ကို ပြသသင့်ပါတယ်။ ဒီလိုဖြစ်တဲ့ လူနာတွေမှာ အခြားကျန်းမာရေးအခြေအနေတွေကို သိရှိနိုင်ဖို့ မှန်ပြောင်း ကြည့်ခြင်းကိုလည်း ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
Antrum gastritis ကိုကုသဖို့ အရေးအကြီးဆုံးအချက်ကတော့ ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်စွာ စားသောက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတ်ယ။ ပေါ့ပါးတဲ့ အစာတွေကို စားသင့်ပြီး အဆီများတဲ့ အစာတွေဖြစ်တဲ့ ဆီကြော် အစားအစာများ၊ ထောပတ်၊ အဆီပါတဲ့ အသားတွေဟာ အစာအိမ်က အစာထုတ်နှုန်းကို နှောင့်နှေးစေနိုင်ပါတယ်။ အသီးအရွက်တွေဖြစ်တဲ့ ခရမ်းချဉ်သီး၊ ခရမ်းသီး၊ အစိမ်းရောင်ရှိတဲ့ အရွက်တွေကို စားသုံးသင့်ပါတယ်။ Antrum gastritis ကိုကုသနိုင်တဲ့ အရာမဟုတ်ပေမယ့် ဆရာဝန်ကုသပေးနေတဲ့ တစ်လျှောက်မှာ သင့်လျော်တဲ့အစာကို စားသောက်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။
လူနေမှုပုံစံပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ အိမ်သုံးကုထုံးတွေအသုံးပြုခြင်းက Gastric antrum inflammation (အစာအိမ်နှင့် အူသိမ် ဆက်ကြောင်းဝရောင်ခြင်း)ကို ကုသရာမှာ ဘယ်လိုအထောက်အကူပြုနိုင်မလဲ။
အောက်ဖော်ပြပါ လူနေမှုပုံစံများနဲ့ အိမ်သုံးကုထုံးများက သင့်အနေဖြင့် Gastric antrum inflammation ကိုကုသတဲ့နေရာမှာနဲ့ လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်နေတဲ့နေရာတွေမှာ အကူအညီပေးနိုင်ပါတယ်။
သေးငယ်တဲ့ အစာတွေကို မကြာခဏစားသောက်ပါ။
စပ်တဲ့၊ အက်ဆစ်ဓါတ်များတဲ့၊ ဆီ၊ အဆီပါတဲ့ အစာတွေကို ရှောင်ကျဉ်ပါ။
အနာသက်သာစေတဲ့ ဆေးတွေကို သောက်ပါ။
ယောဂ ကစားခြင်း (သို့) တရားထိုင်ခြင်းတွေကို ပြုလုပ်ပြီး စိတ်ဖိစီးမှုကို ရှောင်ကျဉ်ပါ။
Gastric antrum inflammation. http://www.gastrojournal.org/article/S0016-5085(86)80003-8/abstract . Accessed January 3, 2017.
Gastric antrum inflammation. https://en.wikipedia.org/wiki/Gastritis . Accessed January 3, 2017.
Gastric antrum inflammation. http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/gastritis/basics/definition/con-20021032 . Accessed January 3, 2017.
ကလေးတွေမှာ တွေ့ရတတ်တဲ့ အစာအိမ်အချဉ်ရည် ဆန်တက်ခြင်း ပြဿနာ
Duodenitis ( အူသိမ်အစရောင်ခြင်း)
ကိုယ်ဝန်ရရှိခြင်း, မိခင်ကျန်းမာရေး, ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်း
Hepatic Encephalopathy (အသည်းကြောင့်ဖြစ်သော ဦးနှော်က်ရောဂါ)